“Waxba kama jiraan in Imaaradka Carabtu lacago ku bixisay in baarlamanku i rido” Madaxweyne Xasan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
“Waxba kama jiraan in Imaaradka Carabtu lacago ku bixisay in baarlamanku i rido” Madaxweyne Xasan
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay warar maalmihii lasoo dhaafay la faafiyey oo sheegayey in dowlado ay ka mid tahay Imaaraadka Carabtu gadaal ka riixayaan xildhibaanada madaxweynaha ugu baaqay inuu is-casilo.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo xalay khudbad ka jeedinayey munaasabad lagu xusayey halgamayaashii SYL oo lagu qabtay hotelka City Palace ee magaalada Muqdisho ayaa been abuur ku tilmaamay wararka sheegay in dowladda Imaaraadku dhaqaale ku bixisay xildhibaanadii isaga ugu baaqay inuu kursiga baneeyo.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka carabtu is garabtaagtay dowladda Soomaaliya, islamarkaana dhaqaale farabadan ku bixixay sidii dowladda Soomaaliya horay ugu socon laheyd.
‘’Waxaa la faafiyey warar sheegay in dowlada Imaaraadka ay lacag ku siineeso baarlamaanka inay xilka iga tuuraan, warkaasi waa been aan waxbo kajirin, Imaaraadka waxa uu gacan siisaa dowlada, waxa ayna dalka ka wadaan mashaariic kala duwan‘’ ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh.
Dhawaan ayaa xildhibaano kor u dhaafaya 100 oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxey madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqeen inuu is-casilo, iyadoo ku eedeeyey shaqo gudasho la’aan.
Madaxweyne Xasan oo ka laabtay ballan uu horay u qaaday “Muxuu ahaa ballankaas?”
Four killed in twin Nairobi blasts as security concerns rise